Alavoly Mahatsikaiky Miaraka Amin’ny mèmes Tenifototra Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2011 9:18 GMT
Ny sasany dia mandinika fa avadiky ny tenifofotra Japoney ho fitobatobahana ohgiri i Twitter, karazana kilalaon-teny izay avy amin'ny fomba fitantarana angano rakugo fahiny . Mifaninana amin'ny fanomezana valinteny lalina indrindra ireo mpandray anjara, momba ny lohahevitra fohy iray.
Milaza i Wordsmith Hideaki Matsunaga hoe:
Maro ny olona no mahita ny laharam-baovaony feno tweet ohgiri. Mipoitra isanandro ny lohahevitra izay tokony hovaliana, tahaka ny hoe “Tovano amin'ny teny hoe ‘vady an-trano manahirana”’ ny sarimihetsika iray fahita matetika dia mivadika ho sarimihetsika mampanonofy vetaveta”.
“Fantatrao hoe “mpanome endrika – na designer” ianao rehefa“ (#デザイナーあるある)
Bitsika mahazatra tamin'ny vanim-potoana Edo (#江戸時代のTwitterにありがちなこと)
Mety ho nampiasa Foursquare ny lehilahy hividianana tapakila any amin'ny faritry ny jiro mena (toerana feno mpivaro-tena) :
Nanana anjara tamin'ny fanovàna ny zava-bita tsara indrindra ho an'ny Tweet isan-tsegondra i Japana ho an'ny hetsika mampientanentana maro, ary hatramin'ny nadravan'ny afo an'i Edo indray (Tokyo ankehitriny) ….
Iray tamin'ireo bitsika nalaza indrindra no niresaka momba ny Tranga tany Honnō-ji, izay naneren'i Akechi Mitsuhide an'i Oda Nobunaga hamono tena. Efa ela talohan'ny vanim-potoana Edo izany tranga izany, fa tsy nampiova hevitra ireo mpibitsika!
Ity iray ity mampahatsiahy ny resaka tamin'ny Komodaoro Perry, tonga tany amin'ny morontsiraka Japoney niaraka tamin'ny sambo mpiadiany mba hanokatra ny firenena.
“Soloy teny hoe “Udon” ny teny iray anaty lohatenina sarimihetsika dia lasa Kagawa izany sarimihetsika izany” (#タイトルの一部をうどんにすると香川が舞台になる)